Twitter inogona kunge iri kufunga nezve sarudzo yekugadzirisa tweets | IPhone nhau
Jack Dorsey, CEO weTwitter: "Unofanirwa kukwanisa kugadzirisa maTweets"
Twitter iri pakati pechikamu chakadzama chekuchinja. Sezvo muvambi wayo wekutanga adzoka kuzotora rairo pasocial network, zvave pachena kuti vanofanira kuita chimwe chinhu kana vachida kuramba vachiwedzera vashandisi uye chengetedza kuvimba kwekambani mavari. Kune akawanda matsva anoita kunge ari kuronga kubva kumapoka akasiyana epuratifomu, kunyange hazvo vashoma chete vachazove avo vatichaona achiitwa nenzira yakajeka.
Mushure mekuchinja kwehunhu kuverenga, uko mafaera enhau, mapolls uye kudonhedzwa mune zana nemakumi mana ematanho emira kumiswa kuverengwa, chinotevera chinogona kuuya iko kugona kwekugadzirisa maTweets akatotumirwa. Ichokwadi ndechekuti kwete kazhinji tinonyora, kazhinji, ma tweets ane zviperengo zvikanganiso kana chirevo chisina kujeka chatinoda kushandura mushure mekuzviburitsa, chimwe chinhu chinongogoneka nekubvisa iyo tweet nekunyora zvekare.
Iko mukana wekugadzirisa izvo zvakaburitswa zvemukati hazvingogadzirire nguva chete, asi zvakare zvinopa chiitiko chiri nani kune vashandisi vezvimwe chete Iyi ndeimwe yesarudzo yanga ichinyanya kudiwa kwenguva yakareba, uye zvinoita sekudaro inogona kuzopedzisira yazeyewa nesocial network uye uone ichizadzikiswa pamasikirini emakomputa edu uye nhare munguva pfupi.
Mukuru wekambani, Jack Dorsey, akataura pasocial network nezve mukana uyu watiri kutaura nezvawo. Uye zvakare, yakajekesa gakava nezvekuti basa iri rinofanirwa kungove revashandisi chete kana kwete.
@howardlindzon usina chokwadi nei urikutora iyi tweet asi ehe, fomu rekugadzirisa rinodiwa. Asi kune wese munhu, kwete iwo chete mabheji mabheji
Unoda nzira yekugadzirisa [ma tweets]. Asi kune wese munhu, kwete ivo chete vane nhoroondo yakasimbiswa.
Tichafanirwa kuona kuti ichi chinogoneka chinoshanduka sei, pamwe nekumwe kuvandudzwa uko Twitter kunogona kukudziridza pamusoro pegore rinotevera, senge iri nani nzira yekuburitsa kurwisa kushungurudzwa kana maturusi ekuvandudza kukosha mukutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Jack Dorsey, CEO weTwitter: "Unofanirwa kukwanisa kugadzirisa maTweets"
8 yemahara mitambo uye maapplication kwenguva shoma (Zvita 30)